Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » National Fallen Firefighter Foundation weputara pọdkastị iru uju ọhụrụ
N'ịghọta na ezumike ahụ nwere ike bụrụ ihe ịma aka maka ndị nwetara ọnwụ, Òtù Mmemme Ezinụlọ na National Fallen Firefighters Foundation (NFFF) na-ebupụta nke mbụ n'ime usoro isii nke pọdkastị ọhụrụ ya, Grief in Progress.
Ọ bụ ezie na pọdkastị ahụ na-egosi Ezinụlọ Hero Fire nke ndị ọrụ mgbanyụ ọkụ dara ada bụ́ ndị a na-asọpụrụ na National Fallen Firefighters Memorial na Emmitsburg, MD, akụkọ ndị ndị ha hụrụ n'anya nke ndị dara ada na-akọ nwere ike inyere onye ọ bụla na-enwe mwute ma ọ bụ ọnwụ aka.
Nụrụ Ezinụlọ Ndị dike Ọkụ na-ekerịta ahụmịhe ha—na mmụta ha
Ihe omume ọ bụla na-ekwu maka otu isiokwu dị ka imepụta usoro nkwado ọhụrụ, na-eme nke ọma n'etiti "atụmanya" obodo na ịchọta ụzọ dị irè isi sọpụrụ onye ị hụrụ n'anya furu efu. Ihe omume mmeghe gosipụtara Sharon Purdy nke Ohio, onye di onye mgbanyụ ọkụ afọ ofufo, Lee, nwụrụ n'ihi nkụchi obi n'ọkwa ọrụ. Sharon ji ihe ọ mụtara site na ahụmahụ a jọgburu onwe ya wee bụrụ onye na-akwado ndị òtù ezinụlọ ndị ọzọ-n'ezie, mgbalị ya mere ka mgbasawanye nke mmemme Heroes Hometown nke na-enye ndị na-agbanarị ndị ọrụ nchekwa ọha uru. Akụkọ siri ike nke Sharon bụ naanị otu ọmụmaatụ nke isiokwu ndị a nyochara na usoro ọhụrụ a.
Dị ka Beverly Donlon si kwuo, Onye isi Mmemme Ezinụlọ nke NFFF, isi ihe mgbaru ọsọ nke usoro ọhụrụ a bụ "ịkpali ndị na-ege ntị ozi olileanya na ọgwụgwọ, na-enyere ha aka inweta nkà ịnagide ihe site n'ịnụ n'aka ndị ọgbọ ha nwetara ihe omume ọjọọ." Ebumnobi ọzọ bụ ịkpali mkparita ụka gbasara ihe ndị dị ugbu a metụtara iru uju, ọgwụgwọ na ntachi obi—na kpalite ụzọ ọhụrụ nke ịhụ ụwa na ijikọ ndị ọzọ. Na pọdkastị ọ bụla, ọkachamara n'ihe banyere iru újú NFFF, Jenny Woodall, na-ekere òkè na mkparịta ụka ahụ ma na-enyere aka ịkwado ịkọ akụkọ ọ bụla.
N'ozuzu, usoro ọhụrụ nke akụkụ isii na-ekpughere akụkọ sitere n'echiche nke afọ dị iche iche, okike na ọrụ ezinụlọ. Nke ọ bụla na-enye ozi mkpali, olile anya na nkwụsi ike maka ndị na-ege ntị na-enwe iru uju ma ọ bụ mara onye ọ bụ. Site na mmesapụ aka nke Fire Hero Families na-ekerịta akụkọ nke ha, NFFF na-ezube ka ndị ọzọ nweta olileanya n'oge ezumike-na karịa.